ရောက်ရောက်ချင်း အောက်ဆီဂျင်စက်တွေကို လိုအပ်နေတဲ့ နေရာလေးတွေကို ချက်ချင်းဆိုသလို လှူဒါန်းပေးလိုက်တဲ့ ခိုင်နှင်းဝေ…. – Cele Oscar
ကိုဗဈ ရောဂါကွောငျ့ လူမှုကှနျရကျ စာမကျြနှာ ထကျမှာဆိုရငျ သဆေုံးသူ သတငျးတှေ ၊ အောကျဆီဂငျြ အရေးပျေါ လိုအပျလို့ တောငျးခံနကွေတဲ့ သတငျးတှေ အပွညျ့ပါပဲ ။ အောကျဆီဂငျြ လိုအပျနသေူ တှလေညျး ရှိနသေေးလို့ အလှူရှငျ တှလေညျး စုပေါငျးလှူဒါနျးပေးလကျြရှိပါတယျ ။
ဒီလို လှူဒါနျးကွသူတှေ အထဲမှာ ခိုငျနှငျးဝလေညျး အပါအဝငျပါပဲ ။အောကျဆီဂငျြ အလှူအတှကျ အလှူငှမြေားစှာ ကောကျခံပွီး အစှမျးကုနျ ကွိုးစားဝယျယူနတောတှရေ့ပါတယျ ။ အခုလညျး သူမှာ ယူထားတဲ့ အောကျဆီဂငျြ စကျတှေ ရောကျရှိလာရာ ခကျြခငျြးကို ဆိုသလို လိုအပျသူတှကေို လှူဒါနျးပေးနတော တှရေ့ပါတယျ ။
ခုလို လှူဒါနျးပေးနတေဲ့ အကွောငျးကို လညျး ” ရတနာ (၅)ပါး ဂုဏျကြေးဇူးတျောကွောငျ့ စကျတှေ ရောကျလာပါပွီရှငျ..ကွိုတငျ စီစဈထားသော အရေးပျေါ လူနာမြား အတှကျ ဦးစားပေး အမွနျ ဌားရပါသောကွောငျ့ (ကိုယျ့ အတှကျတောငျ မခနျြထားပဲ )တခြို့ ပရဟိတ အသငျးမြားသို့ အပွီးအပွတျ လှူဒါနျးခွငျး၊အရေးပျေါ လူနာမြားအား ခဏ ဌားရမျး ခွငျးမြားကို ပွုလုပျထားပါတယျ..နောကျထပျ အကူအညီတောငျးသူ မြားကို ထပျမံ ကူညီနိုငျဘို့ ဆကျကွိုးစားပါမယျ…
အကူ အညီတောငျးသူ မှနျသမြှ ကနျြခဲ့ရငျလဲ ကမြကို နားလညျ ခှငျ့လှတျပေးကွပါရှငျ..နောကျထပျ အမွနျဆုံး ထပျမံ ကူညီနိုငျဘို့ ဆကျလကျ ကွိုးစားပါမယျ..အကုနျ မကူညီနိုငျတဲ့ အတှကျ စိတျသောက မြားစှာလဲ အမှနျ တကယျ ရငျဆိုငျနရေပါတယျ..လှူဒါနျးပေးကွပါသော အလှူရှငျမြား အားလုံး နှငျ့ ခုနှဈရကျ သားသမီး မြားအားလုံး အသကျကယျခှငျ့ ကုသိုလျအား ထပျတူ ထပျမြှ ရရှိနိုငျကွပွီး အားလုံးပဲ ကပျကွီး (၃) ပါး ကြျောလှားနိုငျကွပါစရှေငျ. (ဒုတိယ အသုတျ အတှကျ ပစ်စညျးအားလုံး မကနျြပဲ ဌားရမျးထားပွီး ဖွဈပါတယျရှငျ..) ” ဆိုပွီး ရေးသား ဖျောပွထားရာ ပွနျလညျ ဝမြှေပေးလိုကျပါတယျ ။
ကိုဗစ် ရောဂါကြောင့် လူမှုကွန်ရက် စာမျက်နှာ ထက်မှာဆိုရင် သေဆုံးသူ သတင်းတွေ ၊ အောက်ဆီဂျင် အရေးပေါ် လိုအပ်လို့ တောင်းခံနေကြတဲ့ သတင်းတွေ အပြည့်ပါပဲ ။ အောက်ဆီဂျင် လိုအပ်နေသူ တွေလည်း ရှိနေသေးလို့ အလှူရှင် တွေလည်း စုပေါင်းလှူဒါန်းပေးလျက်ရှိပါတယ် ။
ဒီလို လှူဒါန်းကြသူတွေ အထဲမှာ ခိုင်နှင်းဝေလည်း အပါအဝင်ပါပဲ ။အောက်ဆီဂျင် အလှူအတွက် အလှူငွေများစွာ ကောက်ခံပြီး အစွမ်းကုန် ကြိုးစားဝယ်ယူနေတာတွေ့ရပါတယ် ။ အခုလည်း သူမှာ ယူထားတဲ့ အောက်ဆီဂျင် စက်တွေ ရောက်ရှိလာရာ ချက်ချင်းကို ဆိုသလို လိုအပ်သူတွေကို လှူဒါန်းပေးနေတာ တွေ့ရပါတယ် ။
ခုလို လှူဒါန်းပေးနေတဲ့ အကြောင်းကို လည်း ” ရတနာ (၅)ပါး ဂုဏ်ကျေးဇူးတော်ကြောင့် စက်တွေ ရောက်လာပါပြီရှင်..ကြိုတင် စီစစ်ထားသော အရေးပေါ် လူနာများ အတွက် ဦးစားပေး အမြန် ဌားရပါသောကြောင့် (ကိုယ့် အတွက်တောင် မချန်ထားပဲ )တချို့ ပရဟိတ အသင်းများသို့ အပြီးအပြတ် လှူဒါန်းခြင်း၊အရေးပေါ် လူနာများအား ခဏ ဌားရမ်း ခြင်းများကို ပြုလုပ်ထားပါတယ်..နောက်ထပ် အကူအညီတောင်းသူ များကို ထပ်မံ ကူညီနိုင်ဘို့ ဆက်ကြိုးစားပါမယ်…
အကူ အညီတောင်းသူ မှန်သမျှ ကျန်ခဲ့ရင်လဲ ကျမကို နားလည် ခွင့်လွှတ်ပေးကြပါရှင်..နောက်ထပ် အမြန်ဆုံး ထပ်မံ ကူညီနိုင်ဘို့ ဆက်လက် ကြိုးစားပါမယ်..အကုန် မကူညီနိုင်တဲ့ အတွက် စိတ်သောက များစွာလဲ အမှန် တကယ် ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်..လှူဒါန်းပေးကြပါသော အလှူရှင်များ အားလုံး နှင့် ခုနှစ်ရက် သားသမီး များအားလုံး အသက်ကယ်ခွင့် ကုသိုလ်အား ထပ်တူ ထပ်မျှ ရရှိနိုင်ကြပြီး အားလုံးပဲ ကပ်ကြီး (၃) ပါး ကျော်လွှားနိုင်ကြပါစေရှင်. (ဒုတိယ အသုတ် အတွက် ပစ္စည်းအားလုံး မကျန်ပဲ ဌားရမ်းထားပြီး ဖြစ်ပါတယ်ရှင်..) ” ဆိုပြီး ရေးသား ဖော်ပြထားရာ ပြန်လည် ဝေမျှပေးလိုက်ပါတယ် ။